Realme C25S - realme (Myanmar)
Helio G85 Powerful Processor
အသစ်စက်စက် အဆင့်မြှင့်တင်ပေးထားသော Helio G85 Processor တွင် မြင့်မားစိတ်ချရသော စွမ်းဆောင်မှုမျိုး ထောက်ပံ့ပေးထားသည့် 12nm Octa-Core CPU အမျိုးအစားကို ထည့်သွင်းအသုံးပြုပေးထားသည်။ ၄င်း Processor နှင့်အတူ တွဲဖက်ပါဝင်သည့် MediaTek Gaming နည်းပညာက ဂိမ်းကစား နေစဥ်အတွင်း တည်ငြိမ်ပြီးအထစ်အငေါ့မရှိသော မြင့်မားသည့်စွမ်းဆောင်ရည်ကို ရရှိစေမည်ဖြစ်သည်။
2× Arm Cortex-A75
Up to 4G + 128G
48MP AI Triple Camera က ပိုမိုပြီးပြည့်စုံသည့် အလှတရားများကို ဖမ်းယူနိုင်စေမည်
ရုပ်ထွက်အရည်အသွေးမြင့်မားသော AI Triple Camera နှင့်အတူ အခိုက်အတန့်တိုင်းကို အကောင်းဆုံး ရိုက်ယူနိုင်စေမည့် 48MP ပင်မကင်မရာဖြင့် နေ့စဥ်ဘ၀၏ အရောင်အသွေးစုံလင်မှုများကို အလွယ်တကူ ရယူနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် 2MP macro lens ကို အသုံးပြုကာ ထင်ရှားပြတ်သားသော အသေးစိတ် ပုံရိပ်များကိုပါ ဖန်တီးဖော်ထုတ်နိုင်စေမည် ဖြစ်သည်။ အဖြူ အမည်းသီးသန့် B&W lens ကလည်း အနုပညာဆန်သည့် ဓာတ်ပုံများကို ပိုမိုဖန်တီးစေရန် ပံ့ပိုးပေးထားသည်။
ပုံပြင်ဆန်သည့် ညအလှပုံရိပ်များကို ဖမ်းယူလိုက်ပါ
ကြီးမားသည့် 6000mAh ဘက်ထရီ ပိုကောင်းသော စွမ်းအား ၊ ကြာရှည်စွာ ဆော့ကစား
ကြီးမားများပြားသော ဘက်ထရီအားပမာဏ ပါ၀င်မှုကြောင့် အားကုန်သွားမှာ စိုးရိမ်စရာရှိစေမည် မဟုတ်သည့်အပြင် ဂိမ်းတွေ ၊ ဗီဒီယိုတွေကို တစ်နေ့ တာလုံး စိတ် ကြိုက်အသုံးပြုနိုင်ဖြစ်သည်။ App Quick Freeze လုပ်ဆောင်ချက်က မကြာခဏ အသုံးပြုခြင်းမရှိသော App များကိုပိတ်ထားပေးမည်ဖြစ်ပြီး ဘက်ထရီအားအသုံး ပြုမှုကို အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် လျှော့ချပေးမည်ဖြစ်သည့်အပြင် Screen Battery Optimization စနစ်ကလည်း သင့်ဘက်ထရီအားပိုမိုခံစေရန် အချို့သောမြင်ကွင်းအထူးပြုလုပ်ချက်များကို လျှော့ချပေးစေမည်ဖြစ်ပါသည်။ *
ဘက်ထရီအားပမာဏ အနည်းငယ်မျှသာ ကျန်ရှိချိန်တွင် စွမ်းအင်အထူးချွေတာမှုစနစ် (Super power saving mode) ဖွင့်၍ ပိုမိုကြာရှည်စွာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဘက်ထရီအား 5% သာ ကျန်ရှိနေလျှင်တောင်မှ ဖုန်းအသုံးပြုမှု အခြေခံလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးထားမည် ဖြစ်ပါသည်။
1.92 hours* WhatsApp chatting
5.65 hours* Spotify
2.52 hours* Calling
70.36 hours* Standby
realme C25s တွင် အချိန်တခဏ အတွင်း ဖုန်းကို အလျင်အမြန်အားပြန်လည်ဖြည့်သွင်းပေးနိုင်သည့် 9V/2A အားသွင်းခေါင်းကို တပ်ဆင်ပေးထားပါသည်။
6.5'' ကြီးမားသည့် မျက်နှာပြင်
ကြီးမားကျယ်ပြန့်သော မြင်ကွင်းများ ၊
realme C25s တွင် မျက်နှာပြင်နှင့် ကိုယ်ထည်အချိုးအစား ၈၈.၇% ထောက်ပံ့ထားသော ကြီးမားကျယ်ပြန့်သည့် ၆.၅လက်မ မျက်နှာပြင်ကို အသုံးပြုပေးထားခြင်းကြောင့် ဂိမ်းကစားခြင်းနှင့် ဗီဒီယိုကြည့်ရှုမှုများ လုပ်ဆောင်ရာတွင်ချောမွေ့ပြေပြစ်သည့် သွက်လက်သောထိတွေ့မှုနှင့် အထူးကောင်းမွန်သောမြင်ကွင်းအတွေ့အကြုံတို့ကို ခံစားနိုင်စေမည်ဖြစ်ပါသည်။
TÜV Rheinland ၏ မြင့်မားသည့် စမတ်ဖုန်း အရည်အသွေး ယုံကြည်စိတ်ချရမှု အသိအမှတ်ပြု ထောက်ခံချက်
စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုအခြေအနေများသည် စမတ်ဖုန်း၏ (၃) နှစ် သက်တမ်းပေါ်တွင် အခြေခံ ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
နေ့စဥ်အသုံးပြုမှု စစ်ဆေးချက်ဆိုင်ရာ (၁၀) မျိုး
အစိတ်အပိုင်းများ၏ စိတ်ချယုံကြည်ရမှု စစ်ဆေးချက်ဆိုင်ရာ (၆) မျိုး
အလွန်အမင်းပြင်းထန်သော ပတ်၀န်းကျင် အခြေအနေတွင် စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုဆိုင်ရာ (၇) မျိုး
လက်ဗွေအာရုံခံစနစ်မှာ လုံခြုံမှုနှင့် ထိရောက်မှုအတွက် ညီညွှတ်မျှတစွာလုပ် ဆောင်ပေးထားပါသည်။ တစ်ချက်တို့ထိလိုက်ရုံဖြင့် ဖုန်းကို လုံခြုံလျင်မြန်စွာ ဖွင့်ပေးစေမည်ဖြစ်သည်။
သဘာ၀အသွင်အပြင်ဆိုင်ရာ အနုပညာ ဒီဇိုင်း
သဘာ၀အသွင်အပြင်ဆိုင်ရာ အနုပညာ ဒီဇိုင်း ကို နေ နှင့် သမုဒ္ဒရာ တို့ကို အခြေခံကာ စိတ်ကူးပုံဖော် ဖန်တီးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အလင်းရောင်များက ဖုန်းကို ရိုက်ခတ်လိုက်သည့်အခါတွင် မတူညီသည့် ရှုထောင့်အမျိုးမျိုးမှ နေ၀န်းထဲတွင် သမုဒ္ဒရာ၏ မျက်နှာပြင်က တဖိတ်ဖိတ် လင်းလက်တောက်ပနေသကဲ့သို့ ရှိနေစေမည်ဖြစ်ကာ မြင်လိုက်ရုံနှင့်ပင် နှစ်သက်သဘောကျသွားစေမည် ဖြစ်သည်။
realme C25s တွင် SIM ကတ် ၂ကတ် နှင့် သီးသန့် microSD ကတ် realme C25s တွင် SIM ကတ် ၂ကတ် နှင့် သီးသန့် microSD ကတ် တို့ကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း ထည့်သွင်းအသုံးစွဲနိုင်ခြင်းကြောင့် ပိုမိုအားသာသည့် ကွန်ယက် နှင့် သိမ်းဆည်းမှု အတွေ့အကြုံကောင်းများကို ရရှိစေမည်ဖြစ်ပါသည်။ ပိုမိုကြီးမားသည့် သိမ်းဆည်းမှု ပမာဏ 256GB အထိ ထပ်တိုးတပ်ဆင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
၁. 6000mAh မှာ realme C25s ၏ ယေဘုယျ သတ်မှတ်ထားသော ဘက်ထရီပမာဏဖြစ်ပါသည်။
၂. ဘက်ထရီသက်တမ်း၏ အချက်အလက်များမှာ realme lab မှ ရရှိထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အမှန်တကယ်ရလဒ်မှာ ပတ်၀န်းကျင်ပေါ်မူတည်၍ အနည်းငယ်ပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။
၃. မျက်နှာပြင်နှင့် ကိုယ်ထည်အချိုးအစား အချက်အလက်များသည် realme lab မှ ရရှိထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
၄. စမ်းသပ်ချက် စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်များမှာ realme lab မှ ရရှိထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
၅. ထုတ်ကုန်ဆိုင်ရာ ဓာတ်ပုံများသည် ရည်ညွှန်းကိုးကားအသုံးပြုရန်အတွက်သာဖြစ်ပါသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ထုတ်ကုန်အစစ်အမှန်ကို တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။ အချို့သောထုတ်ကုန်အချက်အလက်နှင့် ဖော်ပြချက်များသည် ကုန်ကြမ်းထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲမှုများကြောင့် ကွဲပြားမှုများ ရှိနိုင်ပါသည်။ ယခုစာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြထားသော အချက်အလက်များမှာ realme မှ ဖန်တီးထားသော နည်းပညာဆိုင်ရာ စမ်းသပ်စစ်ဆေးတိုင်းထွာချက်များ၊ ဓာတ်ခွဲခန်းများမှ စမ်းသပ်မှုအချက်အလက်များနှင့် ကုန်ကြမ်းထောက်ပံ့သူဘက်မှ စမ်းသပ်စစ်ဆေးချက်အသီးသီးတို့မှ ရယူထားခြင်းဖြစ်သည်။ လက်တွေ့အသုံးပြုရာတွင် ယခုအချက်အလက်များမှာ စမ်းသပ်စစ်ဆေးသည့် ဆော့ဖ်၀ဲလ်ဗားရှင်း ၊ သတ်မှတ်ထားသည့် စမ်းသပ်မှုပတ်၀န်းကျင်အခြေအနေ ၊ သတ်မှတ်ထားသော ဗားရှင်းနှင့် လုပ်ဆောင်မှု အခြေအနေများပေါ်တွင် မူတည်၍ အနည်းငယ်ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။